Project Guboo Afaan Oromoo fi Oromoo software
Oromo - English dictionary and Oromo software program project
by Oromo Parliamentarians December 2012
Waan Project kana qoophesuf nu kakasee biyya jiru keessati afaan Oromoo gara afaan birrati hikachuuf mirga dhabuu keenya. Sababin isaa nami afaan hikuu afaan sun seeran hikamuu isaa haqa qabessa ta'uu isaaf dictionary irra ittin mirkanefatan barbada. ykn amoo Software afaan Oromoo google keessa galee afaancha jijiree dhuga ta'uu isaa mirkaneesutu jirachuu qaba ture, kunsi hin jiru. 3faan ijoolee Oromoo biyya kana hojii qacaramuuf ykn barumsa barachuuf ykn guyya dhaloota himachuuf ykn mana murtii irrati afaan dhaloota yeero gafataman Komputera keessati Afaan Oromoo hin galmofnee kanafuu afaan dhaloota isaan Nederlands, ykn English jeechuuf dirqamu. Kun amoo waan dhugaa hin tanee dubachudha. Biyaama hundati afaan dhaloota nami yeero gafatamu Komputera keessa list ykn toora Afan dhaloota hunda galmayee jira Afaan Oromoo amoo hin galmoofne. Kanaaf jeecha Dameen Haawasuma Gummi Paarlamaa Oromoo Projecti Afaan Oromoo gara afaan heedutii jijirfuf bara 2010 egalee ol gudiisun Oromoo -English dictionary qoophesu qooranoo Guboo Afaan Oromoo ykn Oromoo – English Dictionary irrati akka hojeetuuf karoorfate jira.
Hayyuulee Oromoo fi barartoon Univesity Oromiyaa adda adda, Ogeesoon afaan Oromoo, Jarsoolin Oromiyaa, dhabbilee Oromoo fi Wiirtun Qoorannoon Oromoo fi Gaanfa Afrika keenya ilee degersa barbachisuu goochuun fi qindeesun hojii irra olchuuf saganteefatee jira. Qabxiin keenya ini lamafa amoo Jeechoon Afaan Oromoo hundi Guboo Afaan Oromoo (Dictionay) keesaati guramuu qabu ergasi booda amoo softwary keessati galanun Afaan adunya hunda internet keessati jijiruu qabu. Kun hoji yeeron ittio keenamu miti GPO Guyyan Caamssa 29, 2011 (29 may, 2011) 9:00 kasse conferenec wayee afaan Oromoo Belgium iti dhiyeese irrati Jeechoon Afaan Oromoo hundi Komputera keessa galan softwer keessa galaani Oromoo English, France, Arabi, Russia, Germany, Spansh, Suwailli, Norwagiyan, Nedarlands kkf akka jijiraman goochuuf projeect egalee hanga amati itti fufee jira. Yaadi dhimaa kanaaf keeninu kun lafuma kanee utu hin tanee Barbachisumaa Oromoo- English Dictionary erga qooranne booda, Dandeeti atii qabduu ilee erga madalee booda qooranno kee kana irrati yoo ta’ee bu’aa gudaa fidaa jeene yaadneeti. Qooranoon keenya akka mulisuti Oromiyaa keessati Baratoon, Barsisoon, Manen barumsa hanqina Mana kitaba fi hanqina Kitaba fi Gubo Afaan Oromoo ‘dictionary’ akka qaban raggan kun ni mulisa. Bara 2004 (2011/12) keessa Baratoon kutaa 1_8, 9_12, TVET, fi University Oromiyaa keessa :-
KG Popn, Enrolment, GER, 3,049,672
KG Popn, Teachers, 3,979
PRIMARY schools (1-8) students 6,281,674,
Number of Schools 11,729
Primary Teachers at Primary 114,212
Secondary (Grades 9-12) 615
SECONDARY GRADES (9-12), 613,027,
Secondary School Teachers (9-12) 19,342
TVET Enrolment by Level, 152,092
TVET Teachers /Trainers/ 4,698
Undergraduate university (2011/12) 494,110
Enrolment in Postgraduate 5,182
Academic Staff in Higher Education Institutions 20, 822
Ummataa Oromoo (Ethiopia) fi Filamish (Belgium) Seena wal fakata qaban irra qooranoon wagga 5 goodhamee akka mulisuti Oromiyyan amayuu siirna boodati hafaa keessa akka jiru argisisa. Baratoon Filamish tookon tokkon isaan mata matati kuta keesati baratan keessa Dictionary Filamish – Englsh, Filamish-Firans, Filamish- Dutch qabu, Library mana barumsa tokko keessa Kitabi gosa barumsa hunda 50 ol fi Dictionary gosa hunda 50 ol qabu. Internet kuta keessa qabu kan itiin afaan feedhe jijirachuu danda’an. Barsisoon hundi Kitaba gosa barsisan fi Dictionary barbadan tola argachuu danda’uu. Mani Baratoota hundi Klinka fi Bishan dhugati ga’aa qaba. Dataa kana ol jiru irrati hundoofnee kan Oromiyya yoo ilaalee Bishan dhugati hin qaban, Klinik ga’aa hin qaba, Library ga’aa hin qaban, Kitaba ga’aa hin qaban, Dictionary xifuma hin qaban. Barsisoon ilee akkuma baratoota waan hunda hin qaban. Hunda caalaa ijoole Oromoo Afaan English fi goosa barumsa Afaan Englishin keenamuu barachuu kan dadhabanfi Dictionary hin qaban, Library hin qaba, maatii ilee bituuf hin danda’uu. Fakeenyaf Mana barumsaa 11,729 sadarka 1faa Oromiyaa keessa mani barumsaa 6, 602 mana kitaba (library hin qaban, mana barumsa sadarka 2faa 615 keessa mani barumsaa 67 mana kitaba hin qabu. Ijoole Baratoota Oromiyaa Keessa jiran 7.500,000 ol ta’aan afaan English fi barumsa gosaa adda adda baracha jiranfi Oromoo – English Dictionartuu hunda caalaa barbachisa. Ijoolen kun yoo xinaate baratan tokko Dictionay tokko qabachuu qaba yoo jeene, mani kitaba Oromiyaa keessa jiru 5,675 yoo ta’ee ilee kan jirachuu malu garuu 12,344 Mana barumsaa Oromiyya keessa jirachuu qaba yoo jeene tokko tokkon isaa dictionary 10 qabatuu qaba yoo jeene dictionary 123, 440 barbachisa Barsisoon hundi Dictionary tokko mana isaanti qabachuu qabu yoo jeene barsisoon 148,131 dictionary 148,131 barbachisa waluma galati Oromiyya Dictionary 7,771,571 barbachisa.Yeero ama Oromiyya keessa Oromoo - Engilsh Dictionary hin qabnu, amafi kan qabnu English – Oromoo dictionary Dr. Tilahun Gemata, Obbo Ibsa Gutama fi Hinsene Makuriyan bareefamee qoofa. Kun seena Afaan Oromoo hanga tokko achi butun seena galmesee jira. Garuu kun amoo ijoole Afaan Oromoo baratee fi Englisha baruu barbaduuf heedu hin gargaruu. Ijoole Oromoo kan gargaruu Oromoo-English Dictionary dha kun amoo hin jiru yoo jirate iyuu; mana barumsa Oromiyya jiru fi Baratoota jiranfi kan wal ga’uu miti. Hanqini Komputera dhabuu baratoota adunya irraa jiran waliin wal dorgomuu irrati baratoon Oromoo rakko gudaa akka qaban, ijoolee Oromiyya irra Europa fi Amerka deeman irrati qoorannon goodhamee ni argisisa. Ijoole Oromiyya irra dhufan hundi isaan Komputera fayadamuu hin beekan Google seenan wayee barumsaa fi wayee adunya dubsuu hin danda’aan Oromoo hundi kana itti yaaduu qaba. Ijoole Oromoo waan Oromoo ta’aan dhalatanfi beekuma adunyan itti fayadama jiru argachuu dhaba. Waluma Galati Jeechoon Afaan Oromoo tokko ilee utu hin hafiin Afaan Oromoo irra gara English fi Afaan hundati jijiamuu qaba. Sababin isaa Komputera keessa galee software mata isaan afaanoota adunya hundati akka jijiramuu goochuuf nu gargara. Jeechoota Oromoo kana hunda Bareesun afaan Englishti jijiree Guboo Afaan Oromoo-English ni qoophessina jeene amana. Degersa nama hunda fi degersa malaqa, Mateeriala fi dandateefi hirmana gafata. Hanga yoonati Oromoo nami tokko nu gargaruu batuu ilee wari Filamishi afaan nu qajeechuuf humana nu gargaruuf waada seenan jiru. Oromoo hundi biyya keessaf biyya ala jiru saganta qoorannoo kana utu nu gargaree Oromoo hundafi bu'aa gudaa qaba. Saganteefachuu fi caaraqun keenya iyuu amoo dhalooti dhufu akka itti fufee hojeetuuf erga dabarsuu danda'aa.
Oromoon hundi Damee Haawwasuma GPO fi Oromo and Horn of Africa Research center Tesoo kana qunama
Oromo and horn of Africa research centre .
Email opc.gpo@gmail.com Or burqaa1960@yahoo.com
New Website: http://gposite.no-ip.org
http://www.youtube.com/channel/UCOxmOQzGOVOJZZgIJ8vWJ5w?feature=results_main Oromo Parliamentarians tube.